Ndiri mukadzi ane vana 2 asi handigari navo ndinodawo murume ane rudo | Kwayedza
Ndiri mukadzi ane vana 2 asi handigari navo ndinodawo murume ane rudo
01 Jan, 2016 - 00:01	 2016-01-01T03:00:53+00:00 2016-01-01T00:00:26+00:00 0 Views
NDIRI mukomana ane makore 23. Ndotsvagawo musikana ane makore 21 zvichidzika kana mukadzi ane mwana 1 anoda zvekunotorwa ropa. Nhare yangu 0775 364 614.
Makadini mose, ndakambonyorerawo kuchirongwa chino asi shambadzo yangu haina kubuditswa. Ndiri mukadzi ane makore 36 nemwana mumwe uye ndiri HIV positive. Ndiri kutsvagawo murume ari positive seni anoshanda. Ndinoda ane makore 45 – 60, vanoda ndibatei pa0718 356 066.
Ndiri mukomana ane makore 20, ndinotsvagawo musikana ane makore 18-19 wekuroora. Ndiri HIV negative, andifarira ngatibatanei paWhatsApp, sms kana kufona pa0782 170 499.
Ndiri murume ane makore 42 ndinoshanda, handina mwana uye handisati ndaroora. Ndiri kutsvagawo mukadzi wokushamwaridzana naye asina mwana. Anoda ngaandibate pa0772 749 950.
Ndiri mukadzi ane vana 2 asi handigari navo ndinodawo murume ane rudo anoda kuroora kwete kutizisa. Anofanirawo kunge achishanda chero ane vana. Ndine makore 23, ngaave nemakore 26 – 32 akazvipira kuenda kuHIV test. Anoda ndibate paWhatsApp pa0778 101 154.
Ndiri mukomana ane makore 21 ndinodawo musikana ane makore 20 zvichidzika asiri HIV positive. Nhare yangu 0777 807 234.
Makadii veKwayedza? Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi ndakawana vari kuda zvekutamba chete. Ndiri kutsvaga murume anoda zvemusha ane makore 45 nevana vaviri. Ndiri HIV positive, anondida ndibate pa0778 006 279.
Pfee-e, tapindawo pachirongwa! Ini ndiri mukomana ane makore 21 ekuberekwa ndinotsvakawo musikana ane makore 18 – 21 wekuroora ari pachokwadi. Anenge andida anondibata pa0774 960 147. Zvakawanda tinozotaura.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28 okuberekwa ndotsvagawo mukadzi ane makore 20-26 ari pamushongawo seni asi asingaratidzike kuti anorwara. Ini ndiri njanji pakusimba, anongozwawo kuda kuvaka imba seni ngaataure neni pa0777 557 177.
Ndiri murume ane makore 35 nemwana 1 ndinotsvagawo mukadzi wekuvaka naye musha ane makore 30 zvichidzika. Ndiri HIV positive, ngaave anonamata. Vanoda ngavandibate pa0717 139 843.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 43 ndinotsvakawo murume ari pachokwadi. Ndine vana 2, ndinozvishandira muguta reHarare uye ndiri HIV positive. Ndinoda anotya Mwari asi ndapota hangu vane vakadzi vavo musandipedzerewo nguva nekuti ndanzwa nekunyeperwa. Vanoda ndibatei pa0717 718 618.
Makadii veKwayedza? Handisati ndawana akavimbika. Ndakambonyorera, ndiri mukadzi ane vana vaviri ari HIV negative anoda zvemba. Ndinotsvaga murume ane makore 40 kusvika 45 asi varume vevanhu kwete. Ndinoda ane vana vaviri achigara muHarare chete, ngaandibate pa0777 323 056.
Ndiri murume ane makore 38 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 30 kusvika 40. Anoda ngaandibate pa0715 105 998.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 ndotsvagawo musikana ane makore 28 zvichidzika wekuwanana naye. Ngaave mukobvu mutsvuku anoshanda nekuti ini ndoshanda. Ndinoda anonamata sekuti miedzo yakawanda. Zvizhinji tozotaura, anenge andifarira ngaafone pa0716 136 017 chero nguva.
Ndiri mukomana ane makore 21 ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Anenge andifarira anondibata pa0774 960 147.
Ndiri mukadzi ane makore 30 ndodawo murume wekugara naye ane makore 33 – 40 uye ndiri HIV positive asi varume vevanhu kwete musafone zvenyu. Ndoda ari pachokwadi, ndibatei pa0717 404 081.
Makadii veKwayedza? Chirongwa chenyu chakanaka zvikuru ndachifarira. Ini ndiri murume ane makore 39 nevana vangu 3 uye ndiri kutsvagawo mukadzi asi ndoda wechikuru chaiye anoda zvemba ane vana vakewo, ane makore 35 – 45. Nhare yangu 0774 504 336.
Ndiri mudzimai ane makore 36 nemwana mumwe chete uye ndinopinda chechi yeMethodist Church In Zimbabwe. Ndinotsvaga murume ane rudo, anotya Mwari akavimbika. Ndiri HIV positive, ndine hutano hwakanaka. Anenge andifarira ndibatei pa0712 044 468.
Ndiri murume ane makore 40, HIV negative uye ndotsvagawo mukadzi anoda kuvaka mhuri. Ndinoenda kubasa, nhare yangu 0779 191 599.
Ndapota ndishambadzeiwo. Ini ndiri mukomana ane makore 28 ndiri HIV+ asi handiratidzike. Ndinoda musikana ane makore 22 zvichikwira asi ngaave anotya Mwari. Ngaave akatendeka ane rudo chairwo, ava kuda zvemba uye ndapota ndinodawo anoshanda. Andifarira anondibata pa0772 761 114.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1 ndinodawo musikana kana mukadzi anoshanda ane makore 18 kusvika 27. Ndine chitambi chekudhiraivha nepasipoti asi ndiri kushaya pekutangira. Vanoda ndibatei 0771 233 789.
Makadini veKwayedza? Ndakambonyorera asi handina kushambadzwa, ndiri mukadzi ane makore 27 nemwana mumwe. Ndinotsvagawo murume wekugara naye ane makore 32 – 36 ane vana vaviri kana mumwe. Ngaave ari HIV positive seni anotya Mwari kunyanya. Vanotamba kwete ndinoda ari pachokwadi. Ngaatumire sms pa0776 417 357.
Ndanzwa nekunyorera shambadzo yangu isingabudi, ndiri murume ane makore 35 uye ndinodawo mukadzi akazvipira kuroorwa. Ndine vana 2, ndinoshanda uye ndinoda kubva pamakore 18-29 asina chirwere. Ndinogara muHarare, nhare dzangu 0717 812 073.
Ndiri murume ane makore 32 ekuberekwa ndakambonyorera ndakawana anoshungurudza saka takasiyana. Ndotsvagawo musikana anodawo murombo hake ane makore 20 kusvika 26 asingashungurudze anonamatawo kumasowe kana imwe chechi. Ane mwana 1 kana asina, kunyanya wekwaMurehwa ngaandibate pa0783 581 408.
Ini ndiri murume ane makore 28 nemwana 1 ndinoshanda basa rakanaka muHurumende uye ndiri HIV negative. Ndinotsvagawo mukadzi akavimbika ari pa chokwadi ane makore 18-27. Totanga tanoongororwa ropa zvimwe zvozotevera, andida ndibate pa0733 718 042.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, HIV positive asi handioneke kurwara. Ndinodawo musikana anoda zvemba ane makore 18-22. Andida ngaafone kana kutumira sms pa0734 632 076.
Ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 19 anoda zvekuti tibatsirane. Ngaave mupfupi anoenda kuchechi ari HIV negative. Nhare yangu 0738 087 256.
Makadini zvenyu veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 29 okuberekwa uye ndinotsvakawo musikana ane makore 26 zvichidzika. Anogeza, ane rudo rwechokwadi uye tsika dzakanaka. Anoda nezvangu nhamba dzerunhare dzinoti 0782 677 762.
Makadii veKwayedza? Ndinokumbirawo kuti kune vese vanga vachifona pa0717 811 305 ngavachirega zvavo. Mwari vakandinzwira nyasha, ndotenda nechirongwa chenyu.
Makadii henyu veKwayedza? Ndanzwa nekutsotsewa, ndinotsvagawo mukadzi ari nani ane makore 25 kusvika 29. Ini ndine makoe 34. Ndine mwana mumwe, zita rangu ndinonzi Stephen Chuma. Kumusha ndinobva kuMagunje, nhare yangu 0717 209 732.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndotsvagawo shamwarisikana inoshanda. Ini ndinoshanda ndakarongeka, nhare yangu 0733 069 104.